नेपाली बजारमा निशानको नयाँ एसयूभी गाडी ‘निशान म्यागनाइट’
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । नेपाली बजारमा निशानको म्यागनाइट एसयूभी गाडी भित्रिएको छ । नेपालका लागि निशानको आधिकारिक वितरक पायोनिर मोटोकर्पले म्यागनाइट भित्र्याएको हो । म्यागनाइट एसयूभी ११ वटा भेरियन्टमा
न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा । गत मंसिरमा पूर्वी मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका–७, लामीटारकी ४ वर्षीया रुबिना पाख्रिनको बलात्कारपछि हत्या भयो । उनका हत्यारा सोही गाउँका १६ वर्षीय किशोर हुन् । रुबिनाको
कोरोना महामारीको जोखिमका कारण देशभर लकडाउन लगाइएको छ। राष्ट्रप्रमुख संक्रमण फैलिएर परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर नजाओस् भनेर सरकारले पूरै देशमा लकडाउन गरेको बताइरहेकी छिन्। लकडाउनका कारण शहर सुनसान छ, अज्ञात भय
सडक कब्जा गरेर नाचगान (फोटोफिचर)
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ । नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहले गरेको आमहड्ताल सफल पार्न पार्टीकै नेता तथा कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका छन् । यसै क्रममा नेतृ पम्फा भुसालको समूहले ललितपुरको पुल्चोमा पहरा दिँदै
भयमाथि कसरी विजय हासिल गर्ने ?
प्रेम रावत हामी सबै कतै न कतै ‘डर’ शब्ददेखि डराउँछौँ । केही महिनापहिला हामी भोलि के हुने होला भनेर निकै भयभित हुन्थ्यौँ । जागिरको कुरा हुन्छ, पैसा कमाउनुपर्छ । एउटा
मुगु, (नेस) हिमाली जिल्ला मुगुका सबै बिक्री केन्द्रमा करिब ६ महिनापछि खाद्यान्न पुगेको छ । जिल्लाका डिपो तथा बिक्री केन्द्रहरूमा चामल पठाउन ठेक्का पाएको शर्मा ढुवानी सेवा केन्द्रलाई खाद्य व्यवस्था
– डा. राजेन्द्र भद्रा । स–साना नानीहरू बलात्कृत भएको विभिन्न समाचार देखिन्छ । यौनाङ्ग नै विकास नभएका साना नानीहरूलाई पुरुषहरूले किन बलात्कार गर्छन् ? यस्तो कार्य महिलाहरूले चाहिँ गरेको सुनिदैन,
प्रा.डा. सुमनराज ताम्राकार (स्त्रीरोग विशेषज्ञ) । नेपालमा पनि प्रजननको सवालमा समय धेरै फेरिइसकेको छ । पढाइ र आर्थिक अवस्थामा सुधारसँगै ढिलो विवाह गर्ने अनि थोरै बच्चा पाउने प्रथा शुरु भैसकेको
बाँझोपनको उपचारका लागि वर्षौँदेखि मेरो क्लिनिकमा धाइरहेका पुरुष एकदिन करिब १८ वर्षकी किशोरी लिएर आए, मैले छक्क परेर सोधेँ, ‘ओहो !छोरी त कति छिटो यति ठूली पारिसक्नुभएछ त ?’ ५२
‘प्रतिनिधि सभा विघटनको बिरोध गर्नेहरु देश बिरोधी हुन्’ : प्रधानमन्त्री ओली
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको बिरोध गर्नेहरु देश बिरोधी भएको बताएका छन् । आइतबार राजधानीामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एक साक्षत्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले
कपिल काफ्ले, काठमाडौं । दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको दबदबामा पनि लोकतान्त्रिक तथा प्रगतिशील निर्णय दिएर आम जनतामा उच्च छवि बनाएको सर्वोच्च अदालतलाई केही दिनयता आशंकापूर्ण नजरले हेर्ने कार्य बढेको छ ।
आज माघ १० गते, विदेशी सेनासँग नेपाली सेनाले लडाइँ लडेर सबैभन्दा ठूलो जीत हासिल गरेको पहलो युद्ध भएको दिन अर्थात २५८औँ विजयोत्सव । नेपाललाई जितेर लुटपाट मच्चाउन आएको विदेशी सेनालाई
सन्तोष तिमल्सिना, टेक्सास, अमेरिका । म अमेरिकाको टेक्सासस्थित सानएनटिनियोमा क्यान्सर अनुसन्धानका विषयमा पीएचडी गर्दै छु। अहिले म अध्ययनरत कलेजमा सबैलाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिन थालिएको छ । मैले पनि लगाएँ ।
हिसिला यमी नेतृ, जनता समाजवादी पार्टी, काठमाडौं मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका लागि निर्णायक आन्दोलनहरु राजधानीमै भएका छन्, नेवार सहभागी नभई ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका छैनन् । तर, परिवर्तन गराउने यो समुदाय
राम धामी, डडेल्धुरा । डडेल्धुरा जिल्लाको विकट मानिने भागेश्वर गाउँपालिकाको रुपाल क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको नेटवर्क नियमित नहुँदा स्थानीयलाई सास्ती भएको छ । भागेश्वर गाउँपालिकाको वडा नम्वर १ र २ का
विकास भट्टराई, काठमाडौं । देशमा चलेको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका बेला नेपालगन्जका पूर्णप्रसाद पौडेलले दुई छोरा गुमाए । सैनिकले घरमै आएर पाँच लाख लुटे । उनीहरुबाट पाएको यातनाले शरीर
माघीका लागि चाकु बनाउन भ्याइ नभ्याइ (फोटो फिचर)
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । ललितपुरको टंगलमा पुग्दा कामदारलाई भ्याई नभ्याई थियो । चाकु खाँदा जति मिठो हुन्छ बनाउन त्यति नै गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा कामदारले गरिरहेको मेहेनतले स्पष्ट पार्छ।